Maaddooyinka Ceyriinka ah-Heerka quudinta Xoolaha Spirulina Powder Rich in Antioxidant, Minerals, Fatty Acids, Fiber and Protein, No Irradiated, No contaminated, No GMOs manufacturers and suppliers | Boqor Dnarmsa
Alaabta Ceyriinka-Quudinta Xoolaha Darajada Spirulina
Maaddaama quudinta xoolaha loo adeegsado dhaqashada digaagga, waxaa ku bakhtiiya kalluunka iyo kalluunka, kalluunka kulaylaha, shimbiraha qurxinta, fardaha iyo xataa bisadaha iyo eyda.
Tijaabi spirulina darajada qajaarka badda, budada spirulina ee xayawaanka lagu quudiyo
Budada Spirulina oo loogu talagalay ku darista quudinta, budada spirulina ee darajada quudinta, budada spirulina oo tayo fiican leh si loogu quudiyo
Codsiga spirulina ee quudinta:
Spirulina waxaa loo isticmaali karaa qaab nool ama budada algae sida quudinta xayawaanka biyaha ama geedo, ama lagu daro si loo sameeyo pellets. Budada algae ma aha wax sahlan in la quuso, la gariiro, mana fududa in la xumeeyo tayada biyaha marka biyaha la gelinayo. Waxay kor u qaadi kartaa koritaanka xayawaanka kala duwan ee biyaha, waxay kordhin kartaa heerka badbaadada dirxiga waxayna hagaajin kartaa midabka jirka.
Tijaabooyinka ku saabsan adeegsiga spirulina ee harooyinka, qoolleyda, carsaanyada webiga, qolofka, baalasha, eel, iwm ayaa cadeeyay in spirulina ay ku leedahay quud aad u weyn quudinta beeraha, gaar ahaan geedaha biyaha, waxayna leedahay saamayn guud oo kor u qaadista koritaanka iyo hagaajinta heerka badbaadada. , Waxay beddeli kartaa qayb ka mid ah quudinta caadiga ah, waxay yareyn kartaa kharashaadka wax -soo -saarka, waxayna gaari kartaa faa'iidooyin dhaqaale oo la taaban karo
Codsiga Chlorella ee quudinta:
Waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa sed siinta baalasha iyo geedo kala duwan oo kalluun dhaqaale oo qiimo leh. Waxay kaloo leedahay saamaynta ka saarista wasakheynta nitrogen sida nitrogen ammonia iyo nitrous acid ee biyaha. Isla mar ahaantaana, waxay ka saari kartaa biraha culus ee biyaha waqtiga si loo daaweeyo biyaha wasakhda ah loona hubiyo dheelitirka iyo xasilloonida hab -nololeedka biyaha. Dhinacyada oo dhan ayaa door ka ciyaari kara.
Hore: Qalab ceyriin ah - Powder Chlorella Dabiiciga ah oo La Xaqiijiyay
Xiga: OEM ODM Certified Organic Spirulina Kiniiniga 500mg 1000mg iwm